fiction | YANGON LITERARY MAGAZINE
Posted on July 13, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
Hello, My name is Zin Htet Maung. I am an illustrator based out of Yangon. I currently am freelancing and working on various personal projects. My illustrations focus on fantasy and science fiction genre. Ogre Queen The Sun King at the Under-pass Tilda’s Doom Continue reading →
Posted on June 27, 2016 by Kcmmaung	• Leaveacomment
Words by Waine Waine ကျွန်မကိုမွေးဖွားတဲ့နေ့…..အဲ့နေ့ကမိုးရွာလား။နေပူလား။ကျွန်မမသိပါဘူး။သွေးညှီုနံ့တွေ အနံ့ဆိုးတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ကျွန်မကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်မဘ၀က ဆိုးရွားတဲ့ကံတွေနဲ့ဘ၀စခဲ့ရသူပါ။ကျွန်မကိုမွေးမွေးပြီးချင်းမကြာပါဘူး….မေမေရဲ့အော်သံကိုကြားနေရတယ်…လူတစ်ယောက်က ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ ယောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့လေ။ မွေးကင်းစ ကျွန်မ ကြောက်နေရမှာလား။မေမေ့အသံနက်ကြီးကိုကြားနေရတော့ကျွန်မစိတ်မကောင်းမိဘူးလေ။ ခဏကြာတော့ ကျွန်မတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်း အသက်တစ်နာရီတောင် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်မြင်ကွင်း… ကျွန်မ ညီမလေးကို ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်နေတာပါလား။ ကြောက်ပြီးတုန်နေတဲ့ ကျွန်မ မေ့မေ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့လဲ သံတိုင်တွေ ကြားက မေမေ မျက်ရည်တွေကျနေတာပါလား။ မေမေ သူ့ရင်သွေးလေးတွေနာကျင်မူကိုသူမကယ်တင်နိုင်လို့ကြည့်ပြီး နာကျင်နေရရှာတာပဲ။မေမေ့ကိုမုန်းချင်တယ်။ဒီဘ၀ ကြီးထဲကိုခေါ်လာလို့လေ။ ညီမလေးလိုပဲ ကျွန်မရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကိုသူတို့ ဖြတ်တောက်ကြတယ်။ မွေးခင်းစ ကျွန်မ နာကျင်တာ ပြောပြမတတ်ပါပဲ။ ညကြတော့ မေ့မေ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာပဲ ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ယောက်မေမေရင်ခွင်ထဲမှာတိုးလို့အိပ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်မ မောင်လေးက တော့အနာရှိန်ကြောင့်ဖျားနာနေရှာတယ်။ ကျွန်မတို့မေ့မေ့ရင်ခွင်ထဲမှာပျော်နေချိန် ညီမလေးကို လူနှစ်ယောက်လာခေါ်ကြတယ်လေ။ … Continue reading →